भर्जिन भ्यालेन्टाइन | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← २५ वर्षे युवकका ६ पत्‍नी
भ्यालेन्टाइन डे हङकङमा नो रुम फर लभ ! →
Posted on 13/02/2011 by डम्बर 'माइला' | टिप्पणी छोड्नुहोस्
प्रेममा शारिरीक भन्दा भावनात्मक पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ ।संयोग नै मान्नुपर्छ,भ्यालेन्टाइन डे नजिकिदै गर्दा मेरो हातमा त्यस्तै किताब परेको छ । ठमेलको जाभा कफी हाउसको दोस्रो तलाको रेलिङमा अडेसिएर किताबमा घोत्लिदै छु ।एउटी केटी मेरो आँखामा नाच्न थाल्छे,
तेस्रो पेज पल्टाउन नपाउदै उसको ‘असली’ स्वरुप मेरो दिमाखमा घुम्न थालिसक्छ । ऊ बिग्रेकी छे । घोरिएर धेरैबेर सोच्दा कतै त्यही ढल्छेकी भन्ठान्छु तर फत्फताउछे । उसमा ग्लानि छ,रिस छ, आवेग छ र पश्चातापै पश्चातापले ऊ जकडिएकी छ । ‘विचरा’ कफीको चुस्कीसँगै म पेज पल्टाउँछु । ‘म त्यति कमजोर छैन्’ डायलगले मलाई ऊ प्रतिको ममतामा भारी गिरावट ल्याउन दबाब बढ्छ, त्यै पनि ठान्छु, ‘समवयी उमेरकी यसले किन धोका पाई ?’
‘सर,’ वेटरले ममको प्लेट मेरो अघिल्तिर राख्दिन्छ । किताबबाट नजर ममतिर फाल्छु,कसो कसो एक छेउमा बसेका जोडिले मेरो ध्यान खिच्छन । आफ्नो मोबाइलबाट एक अर्काको फोटो खिच्दै मज्जाले हास्छन् । ‘वाउ’ पक्कै केटाले सोलिट सट हानेजस्तो छ,केटी थम्ब्स अप गर्छे र ‘वान्स मोर’ को शैलीमा अर्को पोज दिन्छे, जुस पाइप ओठमा छुवाउदै ।
मोडेल : प्रवेश गिरी र काजोल खड्का । तस्विरः सुन्दर श्रेष्ठ
म फेरि किताबतिरै फर्किन्छु । आधुनिक सज्जाले भरिभराउ एउटा घरको बैठक कोठामा १७ वषिर्या युवती झेक्राइरहेकी छे । ‘के भयो?’ उनकी आमा बारम्बार सोधीरहेकी छिन्, ‘प्लिज शेयर विद मि, ह्वाट्स द प्रोब्लम ?’ ऊ आमालाई सुन्या नसुन्यै गर्छे, बरु जुरुक्क उठ्छे र बाहिर निस्कन्छे । चकमन्न साँझ आकाशतिर मुन्टो फर्काउछे, सायद औसीको यो रात ऊ तारा गन्दै छे होली । ‘हेइ’ आफै झस्किन्छे । ‘मम’ अब चिच्याउछे । फेरि भित्र पस्छे र आमालाई भन्छे, ‘के मैले साच्चै गल्ती गरेँ ?’ आमा झ्वाकिन्छिन्,’आखिर गरीस के ?’ केटी खितिति हास्छे, ‘मस्ती ।’ आमाको हात आफ्नो पेटतिर तान्दै थप्छे, ‘यहाँ तपाइको नाती छ ।’ आमा हाँस्छिन्, ‘यो के नौलो भयो र?’ ‘मैले मेरो भर्जिनीटी (कुमारित्व) गुमाएँ,’ केटी चिच्याउछे, ‘यो ख्यालख्याल लाग्यो ?’ केटीको हाउभाउमा साइकोपन देखिन्छ । यद्यपी आमा त्यसलाई नर्मल मानेझै गर्दैछिन्,सायद छोरीलाई अन्यथा नहोस भन्ने चाहना भएर हुनुपर्छ । ‘अनि को हो त्यो ?’ आमा केटा’bout जान्न खोज्दैछिन् । ‘डन्ट लेट मी टेक हिज नेम,’ केटी घुक्क घुक्क रुनछे, ‘(मलाई उसको नाम लिन नलाउनुस्) मेरो लागि हिजोदेखि उ मरे बराबर ।’ भन्नाले ? ‘ब्रेक अप,’ ३ महिने सम्बन्ध सकिएको घोषणा गर्दै थप्छे, ‘जे चाहेको थियो त्यो पायो र ऊ गयो ।’ ‘भन्नाले ऊ तिम्रो कुमारित्व लुट्न चाहन्थ्यो ?’ ‘हो,’ आँसु पुछ्दै भन्छे, ‘त्यसपछि उसको व्यवहारमा १ सय ८० डिग्रीको फरकपन आउन थाल्यो र अन्ततः एउटा एसएमएसमा भन्यो,म तिमीलाई माया गर्दिनँ ।’
अमेरिकी उपन्यासकर क्यारोलिन म्याक्लोरको ‘भेगन भर्जिन भ्यालेन्टाइन’ पढ्दैगर्दा म मनोविज्ञ डाक्टर नन्दिता केसीलाई फोन गर्छु । ‘केटीले किन धोका पाई?’ सोध्छु । उनी केही नबोली मज्जाले हाँस्छिन् । ‘धोका?’ उल्टै सोध्छिन् । ‘यस,धोका’ म भन्छु । ‘के मा धोका?’ बुझपचाएझै गर्छिन् । ‘प्रेममा ।’ म लाटो लवजमा बोल्छु । उनी फेरि हास्छिन्, ‘त्यो कसरी प्रेम हुनसक्छ ?’ थप्छिन्, ‘त्यो आकर्षण हो,क्षणिक हुन्थ्यो र त्यही भयो,के नौलो भयो र?’ हँ ? ‘बरु केटी आफैले आफैलाई धोका दिई,’ कसरी ? ‘त्यो माया हो भन्ने भ्रममा परी ।’ त्यस्तो हुन्छ ? ‘भइरहेकै त्यस्तै छ,’ आफ्नो विश्लेषण सुनाउछिन्, ‘अहिलेको ट्रेन नै त्यस्तै छ ।’ समाधान ? ‘छ ।’ कस्तो ? ‘किशोरावस्थामा विपरित लिङ्गीप्रतिको आकर्षण स्वभाविक हो,’ अथ्र्याउछिन्, ‘तर त्यो आकर्षण नै प्रेम हैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ उनी के पनि भन्छिन् भने, ‘प्रेममा शारिरिक मात्र हैन मानसिक र मनोवैज्ञानिक पक्षपनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
फोन राख्दै गर्दा अर्को कफी आइपुग्छ,म सुरुप्प तान्छु । फेरि अघिका जोडितिर दृष्टि लाउछु,ती त गएछन् ।
हो पनि यदि भावनात्मक रुपमा कसैप्रति माया जाग्छ भने त्यहा शारिरिक सम्पर्क गौण हुन्छ, जो प्राकृतिक आवश्यकताकै एउटा पाटो हो बरु यसमा सावधानी अपनाउनुपर्छ ताकी असोचनिय दुर्घटना ननिम्तियोस् – हेलोशुक्रबारसँगको भलाकुसारीमा कलेजका साथीहरुपनि त्यस्तै भन्छन् । त्यसका लागि विकल्प सोच्न सकिन्छ,जसले आफ्नो सम्बन्धमा कत्ति पनि तुसारापात नल्याओस् । जस्तो आजभन्दा ६ महिना अघि स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालकोमा एकजोडी पुगे । ‘डाक्टरसाब,’ २४ वर्षिय युवाले २१ वर्षिया आफ्नी साथीलाई देखाउदै सोधे, ‘इज सि प्रेगनेन्ट ?’ डाक्टरले चेक गरिदिए र भने ‘यस,सि इज ।’ ती दुइ अविवाहित रहेछन् । ‘यो वर्ष विहे गर्ने सुर थियो,’ युवतीले भनिन्, ‘तर जुठो पर्‍यो ।’ अब बच्चा त हुर्किन्छ,लगभग ८ महिनापछि जन्मिन्छ पनि । तर विहे भएको छैन । के गर्ने ?
‘डक्टरसाब’ अर्को दिन ती युवति आइन र भनिन्, ‘एवर्सन गर्नुपर्‍यो ।’ आठ वर्षपहिले नै नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाइसकेको हुनाले डाक्टरले गर्भपतन गराइदिए । ‘तीनको सम्बन्ध बिग्रेको छैन्,’ डाक्टर भोला सम्झन्छन्, ‘दे आर मेन्टली स्ट्रोङ ।’ उपन्यासकी पात्रसँग यी युवतीलाई धाज्न खोज्छु । ‘नबुझ्नेले त्यस्तो गर्ने हुन्,’ डाक्टर भोलालाई लाग्छ, ‘यस्तै जोडि भए भने केही समस्या नै आउदैन नी ।’ निष्कर्ष निकाल्छु,कुमारित्व तोडिएसँगै प्रेम सम्बन्ध टुट्नु सभ्य समाजको लागि सुहाउने कुरा हैन्,बरु कसैको कुमारित्व प्रेम सम्बन्ध थप गाढा बनाउने साध्य साबित हुनुपर्छ चाहे त्यो तोडियोस वा चोखै रहोस त्यो इस्यु बनाइनु हुदैन् ।
साझ ढल्किदै छ,क्याफेमा राता हरिया बत्तिका प्रकाश झिमझिम गर्दैछन् । जोडि आउने जाने क्रम उस्तै छ,जति निस्कन्छन उत्तिकै आइरहेका पनि छन् । ती सबैको भिडलाई अब म अध्ययन गर्न थाल्छु, ता की उपन्यासकी पात्र कतै यतै टोलाइरहेकी छे की !
Posted By: Dambar Prasad Rimal Source: ekantipur